Homeसमाचारधेरै फिल्ममा राजेश हमालकी आमा बनेकी सँगम भण्डारी मिडियामा, भारत सुटिँगमा जाँदा राजेश हमालले सलमान खान, आमिर खानलाई वास्ता न’गरेको किस्सा सुनाईन् (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 11, 2021 admin समाचार 4300
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी पु’रानो कलाकार हुन्, सँगम भण्डारी । रेडियो न्पालमा बाल कार्य’क्रममा नाटक प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा बि’गत लामो समयदेखि क्रि’याशिल सँगम काभ्रैकी हुन् । परिवारर समा’जले यस क्षेत्रमा आउन रोक लगाउने र साथ, हौसला नदिने त्यो समयदेखि यो समयसम्म क्रिा’शिल सँगमले थुप्रे चलचित्र र टेलि चलचि’त्रहरुमा आफ्नो अभिनय कला प्रस्तु’त गरेकी छिन् ।
तलहरी चल’चित्रबाट चलचित्र यात्राको थाल’नी गरेकी उनले राजेश हमालको आमाको भुमि’कादेखि अन्य धेरै चलचित्रहरुमा नका’रात्मक चरित्र पनि बहन गरेकी छिन् । केहि बर्ष बेलायतमा बसेर हाल फेरी यस क्षेत्रमा क्रि’याशिल सँगमले पछिल्लो समय चलचित्र मेरो हुने कहिले र क्रिँगे दाउमा अ’भिनय गििरन् । हिजोआजका कुरा लगा’यत अन्य धेरै सिरियल हेर्नेले उनलाई हाल’सम्म पनि सम्झन्छन् । यसैबिच शिशिर भण्डारीसँगको कुराकानीमा सँगमले चलचित्र क्षेत्रका बिक्रिति बिसँ’गतीदेखि सबै क्षेत्रका कु’राहरु गरिन् ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मि’ल्ने साथीको रुपमा रहेकी सँगमले श्वेता खड्काको पछिल्लो बिवाद र बिहे’लाई यसरी हेरिन् र यस्तो बताईन् । साथै राजेश हमालको चल’चित्रमा उनको आमा बनेकी सँगमले भारतमा एक च’लचित्र छायाँकन हुँदा राजेश हमालले सल’मान खान, आमिर खान, सन्जय दत्तलाई वास्ता नगरेको कि’स्सा पनि सुनाईन् । – इताजा खबरबाट
March 24, 2021 admin समाचार 3538
फेसबुकमा चिन`जान भएपछि पहिलो-पटक होटलमा पुगेर भेट्दा…
November 19, 2021 admin समाचार 459
सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको चिन`जानपछि प्रेममा डु’बे’का किशोर–किशोरीबीचको स’म्ब’न्ध वि’यो’गा’न्त बन्दा किशोरी अस्पता`ल र किशोर जे’ल (सुधार गृह) पुगेका छन् । यो घटना भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित बैतूलको हो । किशोरीलाई उच्च र’क्त’स्रा’बपछि नागपुर`स्थित अस्पता`ल भर्ना गरिएको
March 21, 2021 admin समाचार 3782
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222962)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214973)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214648)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212955)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211832)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209389)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209279)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195025)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177945)